ဝဋ်ဆိုတာ by Aung Naing - issuu
မနောပုဗဂ္ဗ မ င်္ာဓမ္မာ ၊ မနောသေဋ္ဌာ မနောမယာ မနသာစေ ပဒုဋ္ဌေန၊ ဘာသတိဝါ ကရောတိဝါ၊ တတောနံ ဒုကမ္ခ နွေတ၊ိ စက္က၀ံဝဟတော ပဒံ။ ။ All mental phenomena have mind as their forerunner; they have mind as their chief; they are mind made. If one speaks or acts with an evil mind, ’dukkha’ follows him just as the wheel follows the hoof-print of the ox that draws the cart.
နေ့စဉ်ပြုလုပ်ေနသော အလုပတ်သို့ ည်၊ စိတသ်ာလျှင်ရှေ့ဆောင်ဦး စီးဖြစ်၏၊ မကောင်းသောစိတြ် ဖင့် ပြုလုပ်ေပြာဆိုမလျှိ င် ထိုမကောင်းမှုသည်၊ ပြုလုပ်ေပြာဆုသိူ နောက်သို့ လှည်း ဘီးရာသည် နွားခြေရာနောက်အစဉ်လကို သ်ကဲသ့ို့ လုက်ိနေတတ်၏။ ။
တစ်ခါတစ်ခါမှာ လူတွေဟာ မခံချင်စတိေ်လးတွေနဲ့ မကောင်မှေုလးတွေကို လုပတ်တ်လေ့ရပှိါတယ်၊ အဲဒလီလို ပုလ်ကို လ်ို့ တကယ်ခရံတာကသူမဟုတပ်ါဘူး၊ ကိယုခ်ရံတာပါ၊
ဒီလဘိုာကြောင်ေ့  ပြာလည်းဆုေိတာ့ ဓမ္မပဒကဖတ်ဖူး ထားတဲ့ စာလေး တစ်ပဒု ကြောင့်ပါ၊ ဓမ္မပဒမှာပါတဲ့ စာလေးကိုမတှသ်ားကြည့်ရအောင်ပါ၊ မြတ်စွာဘုရားရှငလ်က် ထက်အခါက စက္ခုပါလဆုတိရဲ့ ဟန်းတစ်ပါးရှပိါတယ်၊ စက္ခုပါလရဟန်းတော်ဟာ သာ မန်ရဟန်းတော်မဟုတပ်ါဘူး၊
ရဟန္တာအရှငြ် မတ်ကြီးပါ၊ ဒါပေမဲ့ ဘ၀ဟောင်းကမကောင်း မှုတစ်ခေုကြာင့် စက္ခုနှစက်ငွ်း အလင်းမရရှာဘူး၊ ဒါကြောင့် တရားအားထုတရ်င်း စင်္ကြန် လျှေက်အခါ မမြင်မပိဲ ပိုး ကောင်ငယ်လေးတွေကို
တက်နင်းမိပါတယ်၊ အဲဒလီတို က်နင်း တာကို အကြောင်းပြုပြီး အထက်မှာရေးပြခဲတ့ဲဂါထာလေးကို မြတ်စွာဘုရားရှငက်အာ ဂန္တုရဟန်းတွေကိုဟောခဲတ့ာပါ၊ ဒီနေရာမှာ ရဟန္တာကြီးဖြစ်ရက်သားနဲ့ ဘာကြောင့်မျက်စမိမြင်ရတာလဲဆရို င် ဘ၀ အတိတ်ေဟာင်းက အရှငြ် မတ်ကြီးပြုလုပခ်တဲ့ ၀ဋ်ကြွေးကြောင်ပ့ါ၊ ဒီလပိုါဝဘတစ်ခမှုာ အရှငြ် မတ်ကြီးဟာ သမားတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်၊ တစ်နေ့တော့ မျက်စေိရာဂါရနေတဲ့ လူ နာတစ်ယောက်ကေို ဆးကုပါတယ်၊ ဆေးကုတော့ ရောဂါပျောက်ရင် ဆေးဖုိး ပေးဖို့ ကတိ စကားရှိကြပါတယ်၊ ဒီလနို ကဲ့ ရုင်းကုရင်း
ရောဂါကပျောက်လာပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ လူနာက ဆေးဖုိး မပေးချင်တာနဲ့ သူရောဂါဟာ မပျောက်သေးပါဘူးလို့ ငြင်းဆန်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ သမားတော်ကြီးက သိတာပေါ့၊ ဆေးဖုိး မပေးချင်တာလည်းသိပါတယ်၊ အဲ ဒီလသို တိာနဲ့ သမားတော်ကြီးဟာ ဒေါသဖြစ်ပြီး ကဲဒေီလာက်မပျောက်ချင်ရင် နေနှငဥ့်ီး ဆြုိ ပီး
မျက်စကိန်းတဲေ့  ဆးတွေပေးလုကိပ်ါတယ်၊ အဲဒီဆေးတွေခတ်ပြီး လူနာလဲ တစ်ဘ ၀လုးံ မျက်စနိစှလ်ုးံ ဆုးံ ရှုးံ သွားပါတော့တယ်၊ အဲဒဘီဝကလုပခ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသလိုေ် ကြာင့် ယခုလြို မတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ ဆုံပြီး ရဟန္တာအရှငြ် မတ်ကြီးဖြစ်သွားတာတောင် ၀ဋ်ကြွေးကိေုပးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ မျက်စိ နှလံုး ဆုးံ ရှုံးရတာပါ၊ ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာကြည်မ့  ယ်ဆရို င်တော့ သူမပေးလို့ ကုယိက်လုပလ်ကို တ်ာပါ၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒမီကောင်းမှုကြံ ကီးက ကိယုရ့်ဲနောက်ကို တကောက်ကောက်လကို ပ်ါနေပါ တယ်၊ လုပလ်ကို တ်အဲ့ လုပန်ဲ့ ခံရတာနဲက့  မမျှမတတာပါပဲလို့ ထင်စရာရှပိါတယ်၊ ဒါပေ မဲ့ စိတ်ေတွဟာ အချိနတ်ငိုး မှာ
ကဋေပေါင်းများစွာဖြစ်ပျက်နေတာပါ၊ အဲဒစီတိေ်တွထမှဲာ စေတနာလေးတွေကပ်ပါသွားမယ်ဆရို င် လုပလ်ကို တ်ငိုး ၊ ပြောလုကိတ်ငိုး ၊ကြံလကိုတုငိ်းဟာ အားတွေပါနေမှာပါ၊
“ယနေ့ကျွန်ုပတ်ို့ ဖြစ်သမျှသည် မနေ့ကကျွန်ုပတ်ို့ အတွေးအမြင်များမှ ဆင်းသက် သည်၊
ယနေ့ကျွန်ုပတ်ို့ အတွေးအမြင်များသည် မနက်ဖြန်ကျွနပု တ်ို့ ဘ၀များကိတုည် ဆောက်ပေလိမ့မ်ည်” ဆုတိအဲ့ တွေးအခေါ်လုပိါပဲ၊ အရာအားလုံးကို လုပမ်ယ်လဆို့ တိုာကြံစည်စတိက်ူး တာကနေ စတင်တာပါ၊ အဲဒေီတာ့ စာဖတ်သမျူားကို တုကိတ်နွ်းချင်ပါ တယ်၊
နံနက်ခင်း မိုးလင်းလုိ့ အိပယ်ာနုိး တာနဲတ့  ပြိုင်နက် ကောင်းသောအကြံလေးတွေ ကြံစည်ကြပါလို့၊
မကောင်းတာတွေကြံစည်မရိင်၊ လုကိလ်ပုမ်မိယ်၊ လုကိလ်ုပမ်ရိင် နွား ခြေရာနောက်က လှည်း ဘီးရာကြီးလို ကိယြု ဖစ်ရမဲ့ ဘ၀သံသရာတစ်လျှောက်လုးံ တ ကောက်ကောက်လကိုနေမှာစုိး လုပိါ၊ ရွှေမန်းသား
follows him just as the wheel follows the hoof-print of the ox that draws the cart. If one speaks or acts with an evil mind, ’dukkha’ မနသာစေ...